10 Toerana tsara indrindra hanaovana snorkeling any Eropa | Save A Train
Home > Travel Islandy > 10 Toerana tsara indrindra hanaovana snorkeling any Eropa
Orchins an-dranomasina, seahorses, biby mamirapiratra miloko, ary ny sasany amin'ireo rano madio eto an-tany, snorkeling amin'ireo 10 toerana mampientanentana ny saina. Ireo 10 toerana tsara indrindra ho an'ny snorkeling any Eropa, manana fahitana mahavariana ao 20 M. anaty rano, ary fonenan'ny fiainana an-dranomasina mahavariana indrindra eto an-tany.
1. Toerana tsara indrindra hanaovana snorkeling any UK: Devon
Avy amin'ny nosy be vato ka hatrany amin'ny Bridge London, eo avaratry ny Tor Bay, eto no hahitanao ny iray amin'ireo toerana snorkeling tsara indrindra any UK. Jewel anemones amin'ny karazana mavokely sy mavo mamirapiratra, Atala, sy trondro tompot blennies tsy manam-paharoa, afaka mandany snorkeling tontolo andro ao London Bridge ianao.
Mpitsidika maro any UK sy Devon no mety tsy mahalala akory fa mandeha amin'ny iray amin'ireo toerana snorkeling tsara indrindra any Eropa izy ireo. Na izany aza, Devon dia toerana fitsangantsanganana snorkeling sy antsitrika mahafinaritra any UK. Ho fanampin'ny London Bridge, Nosy Lundy dia vatosoa snorkeling hafa, misy tombo-kase volondavenona, jellyfish volana, ary feso feso hahita.
2. Toerana tsara indrindra hanaovana snorkeling any Portugal: Berlenga lehibe
Malaza noho ny morontsiraka mahatalanjona i Portugal, Nosy Berlenga Grande tsy ankanavaka. Just 10 km miala an'i Peniche, iray amin'ny 10 toerana mahafinaritra indrindra amin'ny fitetezana surf any Eropa, Berlenga dia vondronosy mahafinaritra. Izy io dia misy 3 nosy kelin'ny zohy, rano manga mainty, ary vaky sambo.
Raha manontany tena ianao, azonao atao ny mankafy ny sambo sambo amin'ny fitaovam-pandehanana snorkeling. Fanampin'izany, tontolon'ny zavaboary an-dranomasina mahatalanjona toy ny trondro masoandro, vatohara, dia hiandry anao ankoatry ny sarontava. Ny Fort San Juan Bautista taloha izay mijery ity faritra mahafinaritra ity dia ho hitan'ny masonao rehefa miakatra ianao, manampy zava-miafina amin'ny zavatra niainana iray manontolo.
3. Valan-javaboary Port Cros, Frantsa
Hatramin'ny halalin'ny 8 M. amin'ny lalana snorkel manokana, mety ho faly amin'ny trondro an-jatony ao Port Cros ianao valan-javaboary. Ity marina tranainy indrindra tahiry voajanahary dia iray amin'ireo toerana snorkeling tsara indrindra any Eropa. Plage de la Palud no toerana mety hanombohana ny fiainanao amin'ny snorkeling.
Mifanohitra amin'ireo toerana snorkeling mahatalanjona amin'ity lisitra ity, ho hitanao eto 6 buoys mampahalala vaovao miaraka amin'ny zava-misy mahaliana momba ireo zavaboary an-dranomasina hitanao: Soritra vorombola Atlantika Atsinanana, fandoko vita amin'ny loko, vondrona bandy tsy fahita firy, sy trondro maro loko maro hafa.
4. La Silfra, Islandy
Iray amin'ny ny toerana antsitrika tsara indrindra eran'izao tontolo izao, Mazava ho azy fa toerana lava snorkeling any Eropa i La Silfra. Milomano eo anelanelan'ny 2 Kaontinanta eropeana, miaraka amin'ny fianakaviana, na namana, amin'ny rano mitsonika avy ao amin'ny glacier Langjokull, dia zavatra tsy hay hadinoina.
Silfra dia iray amin'ny toerana tsara indrindra amin'ny snorkeling eto amin'izao tontolo izao, noho ny fahitana mahavariana ao 100 M. Ny loko anaty rano, milomano eo anelanelan'ny lalana sy lava-bato, ary izany voninahitra rehetra izany dia adiny iray monja miala an'i Reykjavik. Satria mirona mangatsiaka be ny rano, tokony hamandrika fitsangatsanganana snorkeling ianao, miaraka amina akanjo milomano sy fitafiana mety hampafana anao.
5. Nosy Mena, Sardinia, Italia
Ny rano madio madio dia ilaina amin'ny traikefa snorkeling mahatalanjona. Isola Rossa any Sardinia dia nahazo ny fepetra tsara indrindra amin'ny snorkeling mahafinaritra: rano madio, Tendrombohitra sy lava-bato, fiainana marina izay hitsoka ny sainao, sy morontsiraka fasika fotsy hisamborana anao, eo anelanelan'ny fivoriana snorkeling.
Hahita ny tanànan'ny mpanjono kely ianao, Isola Rossa any North-West Sardinia. vatohara, trondro, ary ny vato mena no toerana mety indrindra amin'ny fialantsasatra fahavaratra. Ankoatry ny filentehan'ny masoandro, afaka mankafy fanatanjahan-tena amin'ny rano ianao, scuba diving, ary fitsangantsanganana amoron-tsiraka italiana. Noho izany, aza hadino ny manangona kitapo tsy misy rano, ary fakantsary anaty rano hahatsiarovana ny tontolo anaty rano any Sardinia.
6. Valan-javaboary Cabrera Archipelago, Espaina
19 Nosy kely mampitohy ny nosy Cabrera, fonenan'ny tontolo iainana an-dranomasina mahatalanjona, tsy voakitikitiky ny olombelona. Zohy manga, ny tahiry voajanahary an-dranomasina dia iray amin'ireo manankarena indrindra any Eropa, ary amin'ny dianao snorkeling, hahita mihoatra ny 500 karazana. Scorpionfish, zanak-orita, sokatra leatherback, vitsivitsy amin'ireo zavaboary an-dranomasina hihaona aminao fotsiny ianao.
Ary, mety hanana vintana mahatalanjona hahita feso ianao avy amin'ny sambo, handeha ho any Cabrera. Ny morontsirak'i Espana dia iray amin'ireo toerana malaza indrindra amin'ny fahavaratra any Eropa, ary Mallorca dia toeran-dranomasina nofinofy ho an'ny mpandeha manerana an'izao tontolo izao. Noho izany, amboary ny akanjo fitondra milomano sy snorkel anao, ho an'ny dia tsy hay hadinoina sy miala sasatra tany Cabrera.
be, manga, ary lalina, Lake Walchensee dia Alpine mahafinaritra tsara tarehy any Alemana. 75 KM avy any Munich, ity toerana snorkeling ity dia ao amin'ny afovoan'ny faritra Bavarian. Noho izany, rehefa miakatra mitady rivotra ianao ary miala sasatra, ny fomba fijery mahafinaritra manodidina anao manome ny toerana mangina indrindra amin'ny fiainana andriamanitra.
Amin'ny fahitana lehibe amin'ny 5m ka hatramin'ny 20m, Lake Walchensee dia iray amin'ireo 10 toerana snorkeling tsara indrindra any Eropa. koa, afaka mitrandraka lalina kokoa ianao ary mihoatra ny trondro avana sy tuna, ao amin'ny farihy rano mangarahara, rehefa milentika ao amin'ny Lake Walchensee ianao.
8. Snorkeling renirano any Aotrisy: Viecht Am Traunfall
Raha milaza aminao ny ankamaroan'ny olona snorkeling ao amin'ny Ranomasina Mediteraneana dia zavatra niainana mahatalanjona, Mahatalanjona ny snorkeling renirano. Rano turkise vaovao tsy misy tomika, any amin'ny faritra ambony any Austria, Viecht am Traunfall no toerana mety indrindra amin'ny snorkeling any Austria. Ny renirano Viecht am Traunfall dia misy haran-dranomasina kanto, ary amin'ny dianao mankany amin'ireo hatsarana ireo, asaina ianao hitsambikina sy hanao canyoning rock.
Ary noho izany, snorkeling ao amin'ny Alps Austrian dia iray amin'ireo traikefa snorkeling mahaliana indrindra any Eropa. Vantany vao vita ny dianao snorkeling, ny havoana maitso sy ny fahitana ny renirano dia ny piknik tonga lafatra ary toerana fialan-tsasatra. Eto, azonao atao ny mandinika ireo tifitra anaty rano mahavariana azonao, ary mankafy ny rivotra madio any an-tendrombohitra Austrian Landscape.
9. Nosy Medes Spain
Ny Nosy Medes dia ao anatin'ny faritra voajanahary tsara tarehy del Montgri. Any amin'ny toerana farany fahavaratra Espaniola, Costa Brava, ny Medianina dia fonenan'ny fiainana an-dranomasina mahatalanjona. Raha mahaliana anao ny fiainana an-dranomasina, avy eo snorkeling eto, tsy ho hadino.
Ireo nosin'i Meda fito, amin'ny morontsirak'i Katalonia, voahodidin'ny Ranomasina Mediterane mangatsiaka dia paradisa snorkeling. Raha ny tena izy, snorkeling any Medes dia iray amin'ireo zavatra lehibe tokony hatao mandritra ny fialan-tsasatra ataonao any Costa Brava. Miaraka amin'ny ankizy, namana, na solo, ny Medianina dia fonenan'ny biby tsara tarehy, seahorses, kintana an-dranomasina, sy barracudas.
10. Toerana tsara indrindra hanaovana snorkeling any Eropa: Elba Italia
Red gorgonians amin'ny lafiny iray, haran-dranomasina mena sy mainty any ampitan'ny morontsiraka, Elba dia paradisa. Ny helodranon'i Sant Andrea ao amin'ny nosy Elba dia toerana hanombohana fitsangatsanganana anaty rano. Lavitra ny seranana sy ny promenade, mahavariana ny fiainana an-dranomasina ao amin'ity nosy Tuscan ity.
Ho fanampin'ny haran-dranomasina tsara tarehy, trondro, sy ny biby, ny morontsiraka italiana dia iray amin'ireo tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Noho izany, raha mila mifoka rivotra ianao eo anelanelan'ny fizahana lava-bato sy mitady trondro masoandro, avy eo ny morontsirak'i Elba dia ny toerana fialan-tsasatra tonga lafatra.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao handamina fitsangatsanganana tsy hay hadinoina amin'ny tontolo anaty rano mahavariana indrindra amin'ireny 10 toerana tsara indrindra ho an'ny snorkeling any Eropa amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “1o Toerana Tsara Indrindra Ho An'ny Fampitsarahana Snorkeling Any Eoropa” amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fbest-places-snorkeling-europe%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
MarineLife PlacesForSnorkeling nilomano SnorkelinginEurope UnderwaterLife